जीवन खुसी र सुखी यसरी बनाऔँ - BirtaJyoti
जीवन खुसी र सुखी यसरी बनाऔँ
हामी दिनमा धेरैजसो खुसी हुन्छौँ कि दुःखी ?
कामको चाप, महत्वकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, समस्या, पीडा, तनाव जस्ता कुराले हामीलाई दुःखी तुल्याइरहेको हुन्छ । चाहेर पनि हामी खुसी हुन सकिरहेका हुँदैनौँ ।
खुसी आफैँमा दुर्लभ वा महँगो चिज होइन । यो प्रकृतिले दिएको निःशुल्क उपहार हो । तर, यति सजिलै र सित्तैमा पाइने ‘खुसी’ पनि हामीसँग छैन । के कारणले होला ?
यसको जिम्मेवार हामी स्वयम् हौँ । विभिन्न अध्ययनले पनि यस्तै भन्छ । खासगरी हाम्रो प्रवृत्ति, व्यवहार, सोच्ने तौर तरिकामा नै यो कुरा निर्भर रहन्छ । अर्थात खुसी हुनु र नहुनुमा बाह्य भन्दा पनि हाम्रो आन्तरिक कारण नै मूख्य हो ।
उदार व्यक्ति बढी खुसी
एक अध्ययनबाट थाहा भएको छ, ‘जो व्यक्ति उदार हुन्छन्, उनीहरु बढी खुसी हुन्छन् ।’ अध्ययनको क्रममा के तथ्य बाहिर आयो भने, उदार हुँदा हाम्रो मस्तिष्कमा परिवर्तन हुन्छ, जसले हामीलाई सुखद अनुभूत गराउँछ ।
खासगरी निष्कपट व्यक्ति, जो आफ्नो आवश्यक्ता र प्रगतिमा केन्द्रित हुन्छन् । अरुको प्रगतिमा बेचैन हुँदैनन् । इष्र्या गर्दैनन् । लोभ र मोह हुँदैन ।
हरेक कुरामा खुलस्त हुने व्यक्ति नै सुखी हुन्छन् । साथै यस्ता व्यक्तिहरु अरुको सहयोग गर्नमा आनन्द अनुभूत गर्छन् ।
कस्तो व्यक्तिको मस्तिष्कमा यस्तो भावना संचारित हुन्छ ?
स्वीजरल्यान्डस्थित ‘युनिभर्सिटी अफ ज्यूरिख’का शोधकर्ताले परीक्षण गरेका थिए, ‘कस्ता व्यक्तिको मस्तिष्कमा यस्तो भावना संचारित हुन्छ ?’
अर्काप्रति उदार भाव राख्ने व्यक्तिहरुमा यस्तो भावना संचारित हुन्छ । आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुने व्यक्तिहरुमा यस्तो हुँदैन ।
भनिएको छ, ‘खुसी प्राप्तका लागि आत्म–त्यागको आवश्यक्ता छैन, केवल आफूलाई थोरै उदार बनाउनुहोस् ।’
जब आफ्नो कारणले अर्को व्यक्ति खुसी हुन्छन्, सन्तुष्ट हुन्छन्, कृतज्ञ हुन्छन् । तब आफूलाई पनि खुसी मिल्ने हो । अरुलाई खुसी तुल्याउन खोज्नेहरु सधैँ आफू पनि खुसी हुन्छन् । यो अध्ययन ‘नेचर कम्यूनिकेशन्स’ नामक पत्रिकामा छापिएको छ ।
मनस्थिती बदल्नु हुन्न
अक्सर हामी बाहिरी वातावरण, घर व्यवहार, रोजगार, साथीभाई, आफन्त आदिको कारण दुःखी हुन्छौँ ।
अर्थात यस्तै कुराले हाम्रो खुसी गायब बनाइदिन्छ । भनिन्छ, ‘चाहे परिस्थिति जस्तोसुकै होस्, मनस्थिति बदल्नु हुन्न ।’
अर्थात् वाह्य परिस्थिती प्रतिकुल हुँदैमा दुःखी, खिन्न हुनु आवश्यक छैन । किनभने हामीलाई कुनै समस्या भयो, प्रतिकुल अवस्था पैदा भयो भने दुःखी भइन्छ ।
तर, दःुखी हुँदैमा त्यसको समाधान भने हुँदैन । त्यसैले दुःखी हुनुको कुनै अर्थ छैन ।
खुसीको स्रोत हामी आफैँभित्र
हामी जे–जति काम गर्छौ, त्यसबाट प्राप्त गर्ने खुसी एवम् सन्तुष्ट नै हो । चाहे राजनीति गरौँ, चाहे व्यापार गरौँ, चाहे धर्मकर्म गरौँ, चाहे सेवा गरौँ, चाहे उद्यम गरौँ, ती सबैबाट खुसी प्राप्त गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ ।
खुसी हुने इच्छा हुने इच्छा स्वभाविक हो, किनभने यही हाम्रो मूल प्रकृति हो । जब हामी बच्चा थियौँ, त्यसबेला त्यसै पनि खुसी थियौँ ।
त्यो हाम्रो प्रकृति थियो । खुसी अन्यत्रबाट मिल्ने होइन । धन दौलतले पनि खरिद गर्न सकिने होइन । किनभने यो हामी आफैँभित्र छ । अर्थात खुसीको स्रोत आफैँभित्र छ ।
आफ्नो काममा रमाउन सिकौँ
एउटा भनाइ छ, ‘यदि तिमी एक क्षणका लागि खुसी हुन चाहन्छौ भने, मिष्ठान्न खानेकुरा सेवन गर । एक दिनका लागि खुसी हुन चाहन्छौ भने बनभोज जाऊ ।
एक महिनाको लागि खुसी हुन चाहन्छौ भने, बिहे गर । र, जिन्दगीभर खुसी हुन चाहन्छौ भने आफ्नो कामलाई प्रेम गर्न सिक ।’
खुसी रहने टिप्स
– सकारात्मक सोच्नुहोस् । नकारात्मकताले मन र शरीरमा विपरीत प्रभाव पर्छ ।
– सधैँ हाँस्ने गर्नुहोस् । उदास वा चिन्ताग्रस्त देखिनबाट बच्नुहोस् ।
– हरेक व्यक्तिको जीवनमा उतारचढाव आउँछ । यद्यपि, आफ्नो मनोबल उच्च राख्नुहोस् ।
– परिस्थिति प्रतिकूल भएको अवस्थामा यस्तो पुस्तक पढ्नुहोस्, यस्तो फिल्म हेर्नुहोस्, जसमा संघर्ष र सफलताको कथा छ ।
– कामलाई प्रेम गर्नुहोस् । आफ्नो काममा रमाउने अभ्यास गर्नुहोस् ।
– अरु व्यक्तिको राम्रो गुण अनुसरण गर्नुहोस् ।
– हरेक रात सुत्नुअघि दिनभरको कामको समीक्षा गरेर अर्को दिन त्यसलाई थप राम्रो एवम् नतिजामुखी बनाउने प्रयास गर्नुहोस् ।
– असल एवम् सकारात्मक साथीहरुको सर्कल बनाउनुहोस् ।
– अरुलाई दुःख दिने, इष्र्या गर्ने भावना त्याग्नुहोस् ।
यसरी सजिलै घटाउनुस् तपाईंको पेट
प्रविधि तथा अन्य सुविधाका कारण मानिसहरुमा मोटोपनको समस्याले खुबै सताउन थालेको छ । भर्खरका युवाहरुको पनि अन्य सबै भाग फिट भएतापनि पेट भने पुत्लुक्क बाहिर ... Read More
बिर्ताज्योती- December 1, 2018
काठमाडौँ । अमेरिकाका ४१ औं राष्ट्रपति जर्ज हर्बर्ट वाकर बुश (जर्ज एच.डब्लू बुश) को ९४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । रगतमा देखिएको समस्याले अस्पताल भर्ना ... Read More
मोरङ । रामलाल गोल्छा आँखा अस्पताल विराटनगरले ३५ वर्षका अवधिमा १४ लाख ७४ हजार ८ सय ४१ जनालाई आँखासम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छ । ... Read More
NEWER POSTप्रदेशसभा संरचना बनाउनै यति धेरै खर्च !
OLDER POSTदमकका सिटी सफारीलाई यस्तो नियम